Chii chinogadzira bhengi rakakura kuita bhizinesi?
Muzuva razvino uye zera, yako bhangi inofanirwa kuve neinternet banking banking. Iko kune online-mabhangi chete uye matavi epanyama anopa online banking services.
Nepo mabhanga mazhinji nhasi aine imwe mhando yepamhepo portal, kwete ese awa akagadzirwa akaenzana.
The yakanakisa bhizinesi rekutarisa maakaunti vane zvakawanda zvezvinhu zvepa online, senge mafoni amana, dijitari dhiri kubhadharisa, uye kunyevera kunyevera.
Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve zvimwe zvigadzirwa zvebhangi zvaunogona kuwana pamhepo. Ndiri kutaura nezve zvinhu zvakaita sebhizimisi mari yekuchengetera mari, zvigadzirwa zvevatengesi, makadhi echikwereti, uye zvikwereti zvidiki zvebhizinesi.
Kunyangwe iwe uchimhanya kutanga kana yakawandisa mamirioni emadhora akasimbiswa mushe, ini ndinokuratidza iwe wepamusoro online bhizinesi rebhangi mabhangi mhinduro kuti uenderane nezvido zvako.
Pamusoro Pegumi Pamhepo Bhizinesi Rebhangi Maakaundi e10
Kune mazana emakadhi akasiyana emabhizinesi epamhepo pamusika nhasi. Asi izvi ndizvo gumi zvepamusoro zvandikurudzira:
Yekutanga Internet Bank
Ini ndichajekesa mhando yemakombiyuta account akapihwa, mitengo, mabhenefiti, uye mamwe mabhangi epamhepo ekubhangi pane imwe neimwe pazasi.
Yakanakisa Online Bhizinesi Bhizinesi Banking Ongororo
Kana iwe uri muridzi webhizinesi diki, freelancer, kana muzvinabhizimusi anotsvaga mhinduro pamhepo-bhizinesi chete rekubhanga, tarisa zvakadaro Novo.
Novo inzira yemazuva ano uye yakapusa yekubata bhizinesi rako rebhangi zvido. Heano kuongororwa kwezvinhu zvepamusoro uye zvakanakira zvebhangi iri repamhepo:
Hapana kubhadhara kwemwedzi pamwedzi
Kudzorera mari kumaATM ese
Huru dzinopinda uye dzinobuda ACH dzinoshandurwa
Mahara emahara ekunze nekune dzimwe nyika
Mahara emabhangi anotariswa
Zvinotora isingasviki maminetsi gumi kunyorera account yeNovo online bhangi bhangi. Iwe unongoda $ 50 yekuvhura account.
Novo ine yakakurumbira mobile app iyo inoita kuti iwe ubate zvese zvebhizinesi rako rebhangi zvido zvirinani kuenda. Inobatana nezvishandiso zvebhizimusi zvauri kushandisa kare, seSlack, Xero, uye Zapier.
Iwe unozobatsirwawo kubva kumatapuro pane zvishandiso zvebhizimusi seHubSpot, Salesforce, Zendesk, Google Cloud, uye Stripe.
Pakazara, Novo inowanikwa yepamhepo-bhangi chete kune varidzi vebhizinesi vachitsvaga nyore. Asi inoshaya zvimwe zvekushandisa kubhengi kupfuura account yekutarisa.
Axos Bank ndeimwe bhanga repamhepo rebhizinesi repamhepo. Asi kusiyana neNovo, Axos inoratidzira suite yemabhangi mabhangi ekugadzirisa, kusanganisira akawanda maakaundi maakaundi uye mamwe mabasa.
Yekutanga Bhizinesi Kutarisa
Bhizinesi Kufarira Kutarisa
Bhizinesi Yekutanga Kuchengetedza
Bhizinesi Mari yeMusika
Bhizinesi Gwaro reDhipatimendi (maCD)
Chitupa cheDhipatimendi uye Registry Service (CDARS)
Axos zvakare inopawo chengetedzo yemanejimendi ekugadzirisa kugadzirisa kwako kwekubhadhara. Ivo vanopa zvimwe zvekutengesa mabasa se Pos zviteshi, kutengeserana kwenhare, uye kutevedza PCI.
Iwe uchazoda angangoita $ 1,000 XNUMX kuvhura account yeAxos yekutarisa bhizinesi.
Akaunti yako inouya nemitero mazana mairi pamwedzi. Iko hakuna mari yemwedzi yekugadzirisa, uye uchave nekwaniso kune yekuwedzera-yemahara ATM network.
Axos ine zvese zvaungatarisira kubva pamhepo bhizinesi rekubhanga bhangi mhinduro, inosanganisira nharembozha ine kureba yekubheka dhipoziti kukwanisa.
Asi kufanana nechero online bhangi chete, izvi hazvisi zvemabhizinesi zvinoda kuisa mari.
Chase Bank ine mamwe emabhizimusi ekubhangi akagadziriswa pamusika nhasi. Ivo vane epanyama mabhangi mataji mukuwedzera kune epamhepo bhangi mabhanga.
Heano maonero eiyo nhatu dzakasiyana bhizinesi yekutarisa maakaunzi anopiwa naChase. Zvese zvitatu zveizvi zvinogona kuvhurwa uye kutarisirwa online
$ 15 pamwedzi yevhisi yebasa
$ 5,000 yemahara mari muhomwe pamabhiriji kutenderera
100 yemahara yekutengesa pamwedzi
Mari yeUS $ 15 inobhadharwa kana ukachengeta chiyero chezuva nezuva chemadhora 1,500. Kana iwe ukabatanidza yako pachako Chase yekutarisa account kune rako bhizinesi account, iyo yakasanganiswa chiyero inosvika kune iyi shoma.
Chase Performance Bhizinesi Kutarisa
$ 30 pamwedzi yevhisi yebasa
Unless unouya waya uye zvemagetsi deposits
250 yemahara yekutengesa pamwedzi
$ 20,000 yemahara mari muhomwe pamabhiriji kutenderera
Mawili maviri epachena anobuda waya pamudhiriri
Mari inobhadharwa ye $ 30 inosunungurwa nekuchengeta zviuru makumi matatu nemashanu zvemadhora ezuva nezuva mukubhadharisa maakaundi ebhizinesi.
Chase Platinum Bhizinesi Kutarisa
$ 95 pamwedzi yevhisi yebasa
$ 25,000 yemahara mari muhomwe pamabhiriji kutenderera
Mhezi ina dzinobuda dzemahara pane denderedzwa (ako anodhura zvakanyanya)
Chase anozoregedza mari inoita sevhisi mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana iwe ukachengeta chiyero chezuva nezuva chemadhora zviuru zana kana kupfuura pakati peanokodzera mabhizinesi ebhizinesi emabhangi.
Sezvauri kuona, Chase ane online bhizinesi rekutarisa account kune mabhizinesi emarudzi ese akasiyana uye saizi. Zviri nyore kuona kuti ndeipi Chase bhizinesi account yakanakira iwe zvichibva pane zvishoma zviyero zvinodiwa uye mahara emahara mari pamadhora.
Pamusoro pekutarisa maakaunti, Chase anewo mamwe acho yakanakisa bhizinesi kadhi pamusika nhasi. Iwe unozobatsirwawo kubva kune vatengesi masevhisi uye online bhizinesi kukwereta mhinduro kana iwe uchida ivo.
TIAA Bank iri sarudzo yepamusoro kune avo iwe unotsvaga pamhepo-yakasarudzika bhizinesi bhangi mhinduro. Ivo vanopa kutarisa maakaunti uye zviwanikwa zvebasa kumabhizimusi ekutengeserana, mabhizinesi madiki, nemasangano asina pundutso.
Kana iwe uri wega-muridzi LLC kana wega proprietor, unogona kuwana yakakwira-goho diki bhizinesi rekutarisa account. Kubva munaFebruary 2020, iyo intro APY muyero ndeye 1.21% yegore rekutanga.
Heano kukurumidza kutarisa kwezvakakosha zvinhu zvega TIAA Bhizinesi Yekutarisa account:
$ 1,500 madiki kuvhura
200 yemahara yekutengesa pamwedzi
Gumi emahara emahara pamhepo bhadharo pamwedzi
$ 14.95 pamwedzi yekubhadhara mari (yaunzwa uine zviuru zvishanu zvemadhora ezuva)
Diki Bhizinesi Kutarisa
Dzemahara Mabhadharo ekudzosera mari inosvika kumadhora gumi nemashanu pamwedzi (isina kuenzana nemadhora zviuru zvishanu pamazuva)
Goho repamusoro pane ese zviyero
$ 1,500 yekuvhura dhipoziti idiki
$ 14.95 pamwedzi yekubhadhara mari (yaunzwa uine zviuru zvishanu pamadhora ezuva nezuva)
Marudzi maviri akasiyana emaakaunti anowanikwa
$ 1,500 madhora ekuvhura dhipoziti
Mari yekubhadhara nemari inowanikwa pachikwereti
Kunyange TIAA Bank ichipa huwandu hwakasiyana hwekutarisa maakaundi emhando, ini ndinoshuvira kuti mari isiri yemubhadharo yekubhadhara yaibviswa zvisinei nehurema.
Iyo yakanakisa account pano ndiyo yakakwira-kufarira yekutarisa account yevanodzvinyirira uye vasina nhengo-imwe nhengo maDVD.
US Bank iri cheni yenyika kune 3,000+ matavi uye anopfuura 4,800 ATM munyika yose. Pamusoro peiyo mabhangi epamhepo ekushambadzira, iwe unozogona kuita mune-munhu kubhengi kana bhizinesi rako richida kuita mari muhomwe.
Kune mana eakasiyana mabhizinesi ekutarisa maakaunzi anopiwa neUS Bank. Ose ane online bhangi ekugona.
Kwete kubhadharwa kwemwedzi
$ 5 pepa chirevo cheti
125 Mahara kutapurirana pamwedzi ($ 0.50 nekutengeserana shure)
Makumi maviri neshanu zvikamu zvemari muhomwe pamwedzi
Iyo US Bank Sirivhe bhizinesi yekutarisa account iri nyore uye yakagadzirirwa kutanga uye mabhizinesi madiki.
$ 20 pamwedzi kubhadharo (wa waive neanokwanisa zviyero)
Mahara emapepa zvirevo
300 Mahara kutapurirana pamwedzi ($ 0.45 nekutengeserana shure)
Iyo Gold bhizinesi yekutarisa account ndeyemabhizimusi madiki kusvika pakati ane hukuru hwekushambadzira huwandu.
$ 30 pamwedzi kubhadharo (wa waive neanokwanisa zviyero)
500 Mahara kutapurirana pamwedzi ($ 0.40 nekutengeserana shure)
Bhanga reUS Bank rePlatinamu rekutarisa account rinopa mubayiro varidzi vebhizinesi nezvikwereti zvakakwira.
Iyo Premium account yakasarudzika. Iyo nhoroondo yakaongororwa; Zvinoreva kuti mari inogona kubviswa nemakredhiti kubva kune yako account account. Izvo hazvizivikanwe pane webhusaiti kuti izvo mareti, zvikwereti, uye basa zvingave chii. Asi iyo account yakagadzirirwa kumasangano akakura ane yakakwirira yekutarisa zviyero uye yakawanda basa. Iwe unofanirwa kubata US Bank zvakananga kuti uwane rumwe ruzivo.
Kuwedzera kune aya mana ekuongorora epamhepo, US Bank inopawo mabhizinesi madiki emakadhi, kiredhiti kadhi, uye mabasa evatengesi. Iwe unenge uine mukana kune zvese zvaungatarisira kubva kubhanga renyika.
Navy Federal iri imwe cheni yenyika nemapazi epanyama mukuwedzera kune online bhizinesi bhangi. Varidzi vebhizinesi vane zvibvumirano kune US Mauto Echisimba, National Guard, uye DoD vanogona kuvhura online yekuongorora account neNavy Federal Credit Union.
Vanopa bhizinesi kutarisa, bhizinesi rekuchengetedza, uye maCD. Heano kuongororwa kweNavy Federal's matatu bhizinesi ekuongorora maakaundi:
Zvakanakisisa kumabhizinesi matsva ane mashoma mari inoyerera chiitiko
Makumi matatu emahara zvisiri zvemagetsi zvemagetsi pamwedzi ($ 30 nekutengeserana mushure)
Bhizinesi Uyezve Kutarisa
Zvakanakisisa kumabhizinesi anokura ane varidzi vakawanda
$ 8 pamwedzi yevhisi yebasa (haigone kumiswa)
Inogadzikana yakatsiga basa rebhangi
Makumi matatu emahara zvisiri zvemagetsi zvemagetsi pamwedzi ($ 50 nekutengeserana mushure)
Bhizinesi Yekutanga Kutarisa
Zvakanakisisa kumabhizinesi makuru ane yakakwirira dhipatimendi zviyero
$ 20 pamwedzi mutero (wa wavha neavhareji zuva nezuva pamadhora zviuru zvishanu)
Yakakura kune yakakura transaction mavhoriyamu
Makumi matatu emahara zvisiri zvemagetsi zvemagetsi pamwedzi ($ 100 nekutengeserana mushure)
Kusvikira 0.45% APY (zvichibva pachiyero)
Ndingakurudzira Navy Federal online kubhengi kune varidzi vebhizinesi vari kutsvaga bhizinesi diki. Navy Federal ine mamwe emhando dzakanakisa dzekubhadhara uye kubvumidza mitengo pamusika nhasi. Saka iwe unogona kutora yako yekutarisa account uye chikwereti kubva kubhengi rimwechete uku uchitonga zvese online.
Kana iwe uri freelancer kana kutanga chirongwa, Azlo iri yepamusoro online-yakasarudzika bhizinesi bhangi kufunga nezvayo. Iyo ingori sarudzo inoshanda kana usiri kugamuchira mari.
Nzvimbo dzakakwirira dzeAzlo bhizinesi rebhangi account inosanganisira:
Hapana muripo wakawandisa
Hapana mari inouya yefoni
Azlo inobatanidza nezvombo zvebhizimusi seSikwere, Stripe, uye QuickBooks.
Iwe unogona kuisamo cheki zviri kure neAzlo's intuitive mobile app. Iwe unozogonawo kugadzira, kutumira, uye kugadzirisa dijitike invoice kune vatengi vako kuburikidza neAzlo papuratifomu. Izvi zvakanakira vatengi vanoda kubhadhara kuburikidza nebhangi kuchinjirwa.
Kana iwe uchitsvaga online bank bank inopa zvikwereti, maaccount akachengetedza, uye mamwe mabasa ebhengi, Azlo haisi yako.
Radius Bhangi ine dzakasiyana-siyana dzemabhizimisi epamhepo mabhangi ekugadzirisa. Heino runyararo runyararo rwe online masevhisi iwe auchawana kuwana neRadius bhizinesi account:
Nhoroondo dzakasiyana dzebhizinesi rekutarisa
Mari yekutengesa mari
Chirevo chengetedza maakaunzi
Commerce zvivakwa dzimba
Sezvauri kuona, Radius inopa zvese zvaungakwanise kuda uye zvakawanda kubva kubhanga bhizinesi repamhepo.
Imwe standout ndeyeTailored Checking account, iyo yakagadzirirwa mabhizinesi anokura. Tailored account unouya ne:
0.75% APY yezviyero zviri pamusoro pemadhora zviuru zvishanu
$ 10 pamwedzi mutero (wa waances nezviyero pamusoro $ 5,000)
Hapana zvishoma zviyero zvinodiwa ($ 100 kuvhura)
Mahara ATM network pasi rese
Unogona kunyorera online pamaminitsi asingasviki gumi pasina kurodha chero magwaro. Pakati pemasevhisi epaInternet uye mobile banking zvishandiso, Radius Bank ndiyo sarudzo yepamusoro yekufunga nezvayo.
Citizens Bank iri sarudzo yepamusoro yevaridzi vebhizinesi iyo inoda kuwana yakawanda yemabhangi epamhepo epamhepo epamhepo. Zvakare, vagari vane matavi 1,100+ uye 3,100+ maATM (zvakanyanya pamhenderekedzo yekumabvazuva). Saka iri sarudzo yakanaka kune vako iwe ne-mu-munhu kubhengi zvinodikanwa zvakare.
Ngatitarisei zvakanyanya kune iyo kambani yekutarisa bhizinesi maakaunti:
Zvakajeka Zvirinani Bhizinesi Kutarisa
Zvakanakisisa kumabhizinesi madiki ane mwero account account
Hapana chidiki chekuvhura dhipoziti
Mazana maviri emahara kutengeserana pamabhadharo kutenderera ($ 200 nekutengeserana mushure)
Bhizinesi Bhizinesi Kutarisa
Zvakanakisisa kumabhizinesi ane yakakwira account basa
$ 25 pamwedzi mutero (wa waved ne $ zviuru gumi nemaviri chiyero chezuva nezuva)
Mazana maviri emahara kutengeserana pamabhadharo kutenderera ($ 500 nekutengeserana mushure)
Citizens Kuongorora Bhizinesi Kutarisa
Zvakanakisisa kumabhizinesi makuru anoda ACH, kuendeswa, waya, uye kutonga kwemari
$ 20 pamwedzi mutero (haugone kumiswa, asi inogona kugadziriswa nemari yekuwana)
Tsika dzekutengesa (inofanirwa kutaura nemumiriri kune rumwe ruzivo)
Pamusoro peaya maakaunzi ekutarisa, Citizen inopa makadhi echikwereti, sarudzo dzekudyara, bhizinesi bhizinesi, bhizinesi rezvehutano, uye akasiyana siyana ebhizinesi zviwanikwa. Masangano makuru achawana mukana wekutengesa mabhangi mabhangi zvakare.
Sezvo zita racho rinoreva, Yekutanga Internet Bank ibhangi riri online chete. Kune matatu matatu akasiyana emhando dzemabhangi mhinduro dzinopihwa nebhangi iri.
Mari yekuchengetedza bhizinesi nemaCD
Zhinji, iyo yekutengesa yekutarisa maakaundi inonyanya kubuda.
Mazhinji emamhepo-emabhangi chete ari pamusika nhasi anovavarira kutanga kutanga uye vashoma mabhizinesi varidzi. Asi Chekutanga Internet Bank ine huwandu hwakasiyana hwebhangi masevhisi emasangano makuru uye emabhizinesi.
Mabhizinesi avhura account yekutengeserana yekutarisa anozobatsirwa nezvinhu zvakaita se:
Akazvitsaurira mabhizinesi ebhangi nyanzvi
Treasure manejimendi masevhisi
Zero ibhalansi account
Bata Chekutanga Internet Bank Kubvunza nezvetsika tsika bhangi bhangi mhinduro kuti uwane izvo zvinodiwa nesangano rako rakakura.
Maitiro ekuti uwane iyo Yakanaka kwazvo Bhizinesi reInternet Bhangi Bhangi Yewe
Ese mabhanga epamhepo pamapeji edu haazove mhinduro kune bhizinesi rako. Iwe unofanirwa kudzikisira pasi zvaunosarudza zvichienderana nezvimwe zvinhu. Iyi ndiyo nzira yatinoshandisa pano kuChikurumidza Sprout kuti uwane iro rakanakisa repamhepo bhangi repamhepo.
Iwe unogona kutanga nekudzikisira pasi sarudzo dzako zvichienderana nehukuru uye chimiro chesangano rako. Mamwe mabhengi epamhepo ekubhangi akanangana nezvekutanga, vega vamiriri, uye vekumashure. Mamwe akagadzirirwa mabhizinesi madiki kusvika pakati nepakati uye makuru masangano.
Semuenzaniso, kana iwe uine bhizinesi diki nenzvimbo nhatu uye vashandi makumi matatu, unogona kubvisa pakarepo maakaunti akagadzirirwa vekufambisirana uye vasina nhengo-nhengo LLC.
Mazhinji emakadhi ebhizinesi epamhepo epamhepo anouya nemari dzemwedzi wega wega. Mamwe mabhengi anopa mabhangi emahara, uye mamwe anokuregedza mari inobhadharwa pamwedzi nekuchengeta mashoma zuva nezuva.
Kusiyana nema account ekutarisa wega, maakaundi ebhizinesi anowanzouya nemitengo yekushambadzira yemwedzi. Iwe unogona kunge uchifanira kubhadhara kusvika kuUS $ 0.50 pakuchinja kumwe chete kana wapfuura iwo miganhu.
Pasinei nemamiriro ako ezvinhu, iwe unogona kuwana nzira yekudzivirira iyi miripo nekutsvaga account inowira mukati mebhangi rako basa.
Kuongorora Maakaunti uye Banking Solutions
Chii chaunoda kubuda mubhangi rako repamhepo? Iwe unozoda account yekutarisa, kana zvishoma.
Asi iyo zuva rinogona kuuya apo iwe uchazoda kuwana kune mamwe mabhangi ekugadzirisa.
Maakaundi ebhizinesi ekuchengetedza mari
Bhizinesi maCD nemaCDARS
Zviri nyore kuwana zvese izvi pasi peimwe denga, sekupokana nekutsvaga rimwe bhanga pane imwe nguva inotevera.
Mu-Munhu Kubhenera Kwebhengi
Online-yakasarudzika mabhangi haasi emunhu wese. Kana iwe uine nzvimbo dzekuchengetera nzvimbo dzinogamuchira mari, iwe unenge uchida kuisa iwo mari pabazi.
Mabhangi akaita seChase, US Bank, Citizens Bank, uye Navy Federal Credit Union ose ane mataundi e-munhu bhanga bhangi. Ingo tarisa kuti pane bazi munzvimbo yako.
Chikamu chekuva bhanga repamhepo repamhepo zvinoreva kuva neruoko rwepamhepo rwakanaka kwazvo. Iyo yakawanda yebasa rako repamhepo rebhangi inogona kuitwa kubva muchanza che ruoko rwako.
Nharembozha dzinoshandiswa kuitira zvinhu zvakaita serekunze cheque deposits. Asi iwe uchazoda app inoenda kupfuura ino yakakosha ficha. Ese mabhanga ari pane edu zvinyorwa zvemazuva ano uye zvinobudirira mafoni emabasa ebhizinesi rako rebhangi zvido.
Heano ongororo yezvakanakisa gumi online bhizinesi bhangi mhinduro pamusika nhasi:
Novo - Rwepamhepo pamhepo-bhizinesi chete rekutarisa account isina mubhadharo wakavanzika.
Axos Bank - Online-yakasarudzika bhengi ine kufarira-inobereka kuongorora mhinduro.
Chase Bank - Yakanyanya online bhizinesi rekutarisa maakaundi emabhizinesi eese masayizi.
TIAA Bank - Yakanyanya yepamusoro-midhi yekutarisa kune vamiriri chete uye nhengo imwechete maSSI.
US Bank - Bhanga reNyika rine ma account mana ekutarisa pamhepo nemabhangi.
Navy Federal Chikwereti Union - Yakanakisa online bhangi kune varidzi bhizinesi nezvisungo kune mauto Echisimba, National Guard, uye DoD.
Azlo - Yakanakisa online-bhizinesi chete bhangi kune vanoita ma freelancers.
Radius Bank - Yakanakisa online bhangi bhangi mhinduro kumabhizinesi anokura.
Citizens Bank - Hapana zvishoma zviyero zvinodiwa uye kutarisa Mahara kuwanikwa.
Yekutanga Internet Bank - Yakanakisa yepamhepo yekutengesa yekutarisa account yezvakaoma bhizinesi rebhangi zvido uye yakakwira transaction yakawanda.
Ini nemaune ndaisanganisira mabhangi emarudzi ese emabhizinesi pano. Kubva kuva freelancers kuenda kumabhizinesi, uye zvese zviri pakati, Ndinoziva kuti iwe unogona kuwana zvauri kutsvaga pane iyi runyorwa.
Yakanakisa Pamhepo Payroll Services
Yakanakisa Pamhepo Fax Services